QM oo sheegtay in Ciidamada AMISOM ay Mas’uul ka yihiin dilka 42 carruur ah sanadkii hore – Balcad.com Teyteyleey
Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) uu mas’uul ka ahaa dilka 42 carruur ah sanadkii hore. “Dhibaatooyinka caruurta ee loo geystey AMISOM waxay asal ahaan ka dhaceen howlgallada looga soo horjeedo Al-Shabaab ama dabka aan kala sooc lahayn ee ka jawaabaya weerarrada,” ayay tiri warbixinta la sii daayay Jimcihii.
Ciidamada Difaaca Kenya, oo si joogto ah ula shaqeynaya xagjiriinta Al-Shabaab, ayaa mas’uul ka ah dilka 11 carruur ah, ayay sheegtay. Dukumiintiga Qaramada Midoobay ayaa intaa ku daray in Maraykanku sidoo kale mas’uul ka yahay dilka ugu yaraan hal ilmo ee 2016ka ka dhaca colaadda Geeska Afrika.
Weeraradii ugu dambeeyay ee Maraykanka ee ka dhanka ahaa weerarrada Maraykanku ku dhexmaray ciidamada Soomaaliya, ayaa dad badan oo rayid ah lagu weeraray goobaha ay ka socdaan dagaalyahannada Al-Shabaab ee koonfurta Soomaaliya. Toban qof oo rayid ah, oo ay ku jiraan haween iyo carruur, ayaa lagu dilay tuulada Bariire ee gobolka Shabeelaha hoose. Ciidamada Maraykanku waxay ku dileen 510 qof oo Soomaali ah tan iyo 2007-dii iyaga oo adeegsanayay weeraro lala beegsaday gaariga.
Hawlgalka AMISOM ee Soomaaliya waxaa loola jeedaa in la xaddido nabad-ilaalinta, waxaana ansixineynaa Qaramada Midoobay. Waxa ay la tacaalayaan khatarta ay Al-Shabaab ka geysatay, koox la xiriirta Al-Qaacida
The post QM oo sheegtay in Ciidamada AMISOM ay Mas’uul ka yihiin dilka 42 carruur ah sanadkii hore appeared first on Ilwareed Online.